Sawiro Ganacsade Somali Ah Oo Lagu Gubay Konfur Afrika. – Bogga Calamada.com
Sawiro Ganacsade Somali Ah Oo Lagu Gubay Konfur Afrika.
September 30, 2017 4:45 pm Views: 407
Wararka ka imaanaya magaalada Pretoria ayaa sheegaya in kooxo gaangiistarra ah ay u dhaceen dukaan weyn oo uu lahaa ganacsade la oran jiray Cabdullaahi Max’med Cali Kadibna ay qaateen dhammaan wixii lacag ahaa ee dukaanka yiillay ka hor intii aysan dilin.
Qof Ka Badbaaday Falkan naxdinta leh ayaa warbaahinta u sheegay in kooxaha Burcadda ah markii ay qaateen hantidii dukaanka tiil ay dab qabadsiiyeen xarunta oo xilligaasi uu ku dhaxjiray muwaadinka soomaalga ah kaasi oo markii dambe halkaasi ku dhax dhintay isagoo gubtay.
Boqolaal katirsan Jaaliyadda Soomaalida Koonfur Afrika ayaa ka qeyb galay aaska loo sameeyay ganacsadaha ladilay waxayna sheegeen in ay sare usii kacayaan falal dambiyeedyada ka dhanka ah dadka Soomaalida.
Dallka Konfur Afrika waxaa si joogta ah loogu dilaa dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi gaar ahaan kuwa Mehradaha ganacsi ku heysta dalkaasi.